Internet Futhi Buying Used Cars
Posted by Rob Y. ngo-January 10, 2016 · Shiya amazwana
With the usungula inthanethi, ukuthenga izimoto ezisetshenziswa kanye nazo zonke izinhlobo zezimoto isishintshe kakhulu. Abathengi enakho xaxa futhi unolwazi mayelana uthenga futhi yini okumelwe siyibheke. Ibhizinisi isishintshe kakhulu kule minyaka 40 iminyaka futhi ikakhulukazi saleli shumi lokugcina leminyaka.
Abantu angaya inthanethi futhi sibheke amanani kanye nezimoto kanye Imibiko umlando imoto ukuhlola isimo izimoto ngisho nangaphambi ukunyathela lot. Futhi kubonakala ibhizinisi ingase ishintshe ngisho nangokwengeziwe ngokusho Josh Hyatt on http://www.autoremarketing.com. Muva Waxoxa Rick Ricart. Nasi amazwibela emifushane esihlokweni –
Rick Ricart on ikusasa embonini esetshenziswa yemoto
Wonke umuntu ubelokhu ebhizinisini emotweni yokuthengisa selokhu engu Internet Cishe uzovuma ukuthi, kahle, izinto eziningi ezahlukene kunakuqala babe.
Amakhasimende kakhulu ukwaziswa. Kunezindlela eziningi ngezindlela eziningi ukuthengisa imoto. Kodwa njengoba lesi saga esidala uya, njengoba izinto ushintsho, abaningi ayizukushintsha.
Lokho kwaba umyalezo owodwa ezibalulekile okwabelwana by Rick Ricart, likaSekela Mengameli yokuthengisa nokumaketha at the Ricart Automotive Group kanye oyisizukulwane sesithathu imoto umdayisi.
Lapho usanda ekhuluma nge Ricart, lokumaketha Auto bambuza ukuthi yena umbonile ushintsho ibhizinisi phakathi nokuphila kwakhe, ezingaphezu kuka kwamashumi amathathu awo aye wachitha embonini eyenza izimoto.
"Njengoba bengilokhu kwezamabhizinisi, kungcono a lot kancane othethelelayo … Ngicabanga isisho esidala of, 'Imoto wathenga kwesokudla kwakuyinqubo okwase kuyiminyaka umbuso 50 amaphesenti angu bathengisa. "Futhi namhlanje, uma ilungelo esetshenziswa imoto wathenga kwesokudla futhi merchandized ngendlela efanele, kungcono 85 amaphesenti angu bathengisa," uthe. "Laba abanye 15 amaphesenti angu nje okwenza ikhasimende ufuna ukushiya. "
Futhi, isikhathi esiningi, abaningi umdayisi kungaba Cishe uzovuma. By the time kokuba afinyelele elidayisa, ikhasimende isilinganiso nokunye okuningi unolwazi mayelana ukuthenga sabo ezazingaphambi digital ulwazi ngeminyaka. Ngokuvamile, ikhasimende yazi okuningi ngemidlalo ye imoto ethize ukwedlula umdayisi isilinganiso onesifo ukwazi mayelana ezihlukahlukene izimoto. Yikuphi lokho kuholele ekuhlaleni inqubomgomo Ricart sika othi abasebenzi yokuthengisa "ukudayisa izimoto,"Kodwa kunalokho 'ukuvumela amakhasimende ukuthenga imoto."
Bacedze kufundza emkhatsini Article Lapha
Futhi kubonakala kukhona ushintsho nakakhulu ngokuza esetshenziswa imoto imoto imboni yokuthengisa ngaphezulu wenziwa ngqo phezu internet ngaphandle ngisho ebuka imoto. Lokhu kumele alethe umbuzo, Ungamthanda yini ngempela ukwethemba ukuthi uthola lokho ukukhokhela? Futhi kanjani wazi ukuthi imoto akanayo nezindaba ezinkulu noma uke waba nanoma iyiphi esikhathini esidlule ngaphandle izandla phezu kwawo kokuba look yakho umakhenikha at it? Ungalokothi kancane, Silicon Valley is jumping on enqoleni band ukuba wenze internet yokuthengisa eziningi isiqalo ups ezintsha njengoba Pete Carey wabhala isihloko MercuryNews.com –
Abadayisi Virtual zikwenza ukuthenga izimoto ezisetshenziswa kobuhlungu
Silicon Valley is lesihehako isiqeshana hidebound esetshenziswa-car imboni ubuchwepheshe elenza ukuthenga imoto indaba izinkinobho ezimbalwa on smartphone.
Umkhankaso in kule minyaka emibili edlule, isigodi zokuqala Shift futhi Beepi, Phoenix Carvana nabanye abambalwa baye babeka pre-owned car ukuthenga online, lapho amadili kungenziwa lishaywe ngezimali etholwe imizuzu, nemoto zilethwe emnyango wakho.
“Ngicabanga ukuthi sonke bangena esivumelwaneni sokuthi izinto eziningi okungenziwa ukuze nomthelela omuhle kanjani izimoto zidayiswa ngo-U.S,” wathi Valentin Gui, co-umsunguli Instamotor, a San Francisco uqalisa esesikhundleni uhlelo lokusebenza ukuthi uxhuma nabathengisi futhi abathengi, lenza ukuhlolwa digital ukusiphula ukukhwabanisa kanye nezinye izinkinga. “Kukhona izinto eziningi kangaka ongazenza nge ubuchwepheshe ukuze uthuthukise ngalolo.”
Inqubo esetshenziswa ibhizinisi imoto — kulinganiselwa ngaso $640 ukuze $700 billion in 2015 — “ayishintshanga kangako kule minyaka 50 Eminyakeni,” ngokusho IBISWorld sika 2015 umbiko umkhakha.
Kodwa ushintsho siyeza. Ngokusebenzisa ubuchwepheshe mobile futhi ubuchule ukuthi ukubikezela ngokunembile kungakanani imoto uyobe ukulanda futhi onobuhle ibhizinisi abagcina emkhathini wezulu ephansi kakhulu kunalokho oyikho wabenza, izinkampani ezintsha bathi ungathola hle deal for kokubili nabathengisi futhi abathengi. Zibuye zigcizelele ukungafihli izinto nokuphatha value nge eziyisikhombisa- nosuku-10 uphindela kungekho imibuzo ebuzwa.
Ngathola mathupha ukwaziswa okuthi- sibheke mobile technology enophephela imoto ukuthenga a izinyanga umbhangqwana edlule indodana yami upheqa Craiglist imoto pre-owned, nihlangana ezinye zezinkinga evamile. Imoto yokuqala yathola ibingabhalisiwe egameni lomthengisi. Lowo elilandelayo kwaba 30 miles away nge umthengi ezahlukene abazoba iza mgubho. A nomthengisi lase eyodwa efakwe ohlwini, kodwa lokho ayengazange kunikelwe okwamanje futhi akatholakalanga ngokushesha.
Khona Wafumanana Prius on Craigslist ukuthi kwaba ikhangiswe ngokuzimisela Shift for umnini wayo, othile owayephila San Francisco.
A Shift “yemoto Umthandi” (lokho isihloko esemthethweni) eshayela imoto endlini yami e Palo Alto kusukela lot Shift eNingizimu San Francisco. Umthandi womculo Shift sika — a USC Grad like indodana yami — waya phezu wokuhlola 200-iphuzu emotweni by Mechanics yenkampani. Ngemva kokuhamba ngemoto test, indodana yami, walithenga, kokusayina amaphepha — kuhlanganise ukubhaliswa — ekamelweni lami lokuphumula.
Qhubeka ukufunda lapha
Ngakho sicabanga internet nabathengayo esetshenziswa izimoto kuyinto emangalisayo. Abathengi abafundile xaxa futhi ube ongakhetha okuningi nezimoto ongakhetha kuzo. Thina ngokwethu sizincome ngani emabandleni Al Gore owasungula internet 🙂 futhi sikulindele ngabomvu ukubona ukuthi ikusasa lisiphathele ushushiso esitolo for embonini yezimoto kanye internet!
Thina asamukelanga isinxephezelo ekubhaleni le post. Asinayo uxhumano impahla brand, Imikhiqizo, noma amasevisi esiziphawulile.